वीरगञ्ज महानगरको बजेट ११ महीनामा आधा पनि खर्च भएन
असार ११, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को ११ महीनामा बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
महानगरले यो वर्षका लागि रू.४ अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा रू. २ अर्ब ११ करोड ६३ लाखमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेट आकारको ४७ प्रतिशतमात्र हो ।
महानगरको सातौं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ का लागि पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार पूँजीगततर्फ रू. ३ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरिएकोमा रू.१ अर्ब १२ करोड ८३ मात्र खर्च भएको छ । यो प्रगति पूँजीगत बजेटको ३७ प्रतिशत मात्र हो ।
वितेको माघ महीनादेखि कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका पूर्वाधार निर्माण र उपायहरूमा केन्द्रित हुनु परेकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अधिकांश विकास योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा भएकोले वर्षको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान महानगरको छ ।
चालू वर्षमा साधारण खर्चतर्फ रू. १ अर्ब ४४ करोड अनुमान गरिएकोमा ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । विगत ३ वर्षको खर्चको तुलनामा यो वर्ष सबैभन्दा न्यून खर्च हुने देखिएको छ । अघिल्लो समीक्षा वर्ष २०७५/ ७६ मा कुल बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
त्यो वर्ष रू. ५ अर्ब ९ करोड बजेट बनाएको महानगरले ११ महीनामा ५३ प्रतिशत बजेट उपयोग गरेको थियो ।
चालू वर्षको ११ महीनाको खर्च ६ प्रतिशत बिन्दुले न्यून देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको अन्तिम महीनामा भएको खर्च अनुपातका आधारमा यो वर्ष न्यून खर्च हुने देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा रू. ४ अर्ब ३० करोडको कुल बजेटमध्ये ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
अघिल्ला २ वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८६ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष करीब ४९ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । विकास निर्माणको मुख्य समयमा कोराना संक्रमण र नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनले योजना रोकिँदा विकास खर्च प्रभावित भएको महानगरले बताएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।‘माघ महीनामा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटियो । संघ सरकारले भीडभाड नगर्न र सचेतना अपनाउन निर्देशन दिएपछि कोरोना विरुद्धको अभियानमा जुट्नु परेकाले विकास निर्माणका काम ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ महानगरको बजेटमा भनिएको छ ।